Mividy Multifunctional Keychain Hexagon Coin Outdoor EDC Tool | WoopShop®
Fitaovana Keychain Multifunctional Hexagon Coin Outdoor EDC Tool - Mainty tafaverina ary halefa raha vantany vao tafaverina ny tahiry.
Ara-nofo: Stainless vy
Antsy miforitra Tactical Survival: Portable Multifunction Folding
Plier Stainless Steel Aforeto: Varavarankely Antsy Keychain
Fitaovana: 420 Stainless vy + plastika
Habe: 4CM × 4CM × 1CM
Fampiasana toe-javatra: Mahafeno ny ankamaroan'ny filana isan'andro momba ny antsy sy hety - sokafy ny baoritra amazona, tapaho ny tady kely, sns.
Fonosana misy: Multifunctional Hexagon Coin
Fashion Modern: Ity gadget misy fitaovana marobe ity dia natao tamin'ny endrika hexagon tokana amin'ny fomba maoderina. Izy io dia tonga miaraka amin'ny fiasa maro mba hanomezana anao fitaovana iray azo ampiasaina amin'ny fotoana rehetra mety ilainao. Ity fitaovana kely ity dia manana zavatra maro azo atolotra. Ahitana antsy miforitra, mpanapaka fehin-kibo vonjy maika, setin'ny screwdriver, karatra mainty misy fitaovana maro misy fiasa toy ny tsipika, fanerena hex, fanokafana tavoahangy, rakitra, mpanapaka kofehy ary mpisintona fantsika.
Mora entina: Ity hexagon maro-fitaovana ity dia mora entina miaraka aminao satria kely ny habeny dia 1.5 santimetatra fotsiny ary miaraka amin'ny peratra fanalahidy hametahana amin'ny mpihazona lakile anao.
Hevitra fanomezana lehibe: Ity peratra fanalahidin'ny karatra hexagon ity dia manome fanomezana mahasoa sy manokana. Fanomezana tonga lafatra ho an'ny ankizilahy, scout, dada, vady, sipa, mpiara-miasa, na lehilahy amin'ny fiainanao.
Fanomezana Andron'ny mpifankatia ho an'ny lehilahy: Sarotra ny mahita fanomezana tonga lafatra amin'ny andron'ny mpifankatia. Izany dia manome fanomezana mahafinaritra amin'ny andron'ny mpifankatia ho an'i dada, vady, raibe, zanakalahy, sipa, mpiara-miasa. Fanomezana lehibe ho an'ny lehilahy amin'ny andron'ny mpifankatia.
tsara sy mirindra, ny ampahany rehetra azo alaina dia tazonin'ny andriamby tsy misy na dia iray aza afaka mianjera ho azy
Mifanaraka ny entana, mila mitsapa ny asany rehetra, fandefasana haingana
Fitaovana tsara, multitool azo ampiharina, heveriko fa hiasa tsara ho ahy izany,